Kismaayo News » Khaatumo State Gudoonka Istanbul
Khaatumo State Gudoonka Istanbul
Kn:Wax u muuqda guushii ugu balaarneyd oo mid kamid ah maamul goboleedyada dalka ka jira uu ku talaabsado mudo gaaban ayaa waxaa soo baxaysa in maamulka Khaatumo State uu jaray masaafo dheer oo u suuro galin karta inuu noqdo hogaanka Mustaqbalka ee dalka.
Shirkii Istanbul ee maalmo ka hor ku soo gabagaboobay dalka Turkiga wuxuu muujiyay ugu yaraan halka ay kala taaganyihiin gobolada dalka ee Waqooyiga iyo Koonfurta. Wax u muuqday ku xumayn ama ku qabjabin ayaa ka dhacay shirka, 4 kooxood loo laga xulay shirka ayaa waxaa loo igmaday inay gudoomiyeen afartaba xubno ka socday maamul goboleedka cusub ee Khaatumo State. Gudiga Odayaasha dhaqanka, Siyaasadda, Dhaqaalaha iyo kan dib u heshiisiinta ayaa intaba waxaa u gudoominayay Khaatumo State.
Arinta xiisaha leh ayaa ahayd in Somaliland iyo Puntland oo labaduba aan ictiraafsanayn jiritaanka Khaatumo State ay madax xanuun ku noqotay inay gudoomiyihii gudiga dhaqaalaha oo ahaa shaqsiga lagu magacaabo Aabaha Khaatumo State ay u gudbiyeen waraaqihii codsiga dhaqaalaha ee maamulladooda.
Ma aha wax iska dhacay in 4 gudi oo Soomaalida 21-ka sano qalalaasaha siyaasadeed ku jirta uu halmaamul oo waliba curdan ah iska qaato, ayadoo waliba baryahan danbe wax kasta oo la qayb sanayo lagula cararo nidaamka 4.5-ka. Laakiin waxay dad xog-ogaal ah KN u sheegeen in arintan ay ahayd mid Koonfur muwaafaqadeeda u dhantahay isla markaana ay rabeen inay ku qabjabiyaan maamulada Somaliland iyo Puntland.
Masuuliyiin ka tirsan labada maamul een kor ku soo sheegnay ayaa ku eedeeyay dawladda Turkiga inay qorshahan wax ka maleegtay, waxaana soo baxaya in nidaamyada lagu hormarinayo dalka ay saamigooda helayso Khaatumo State, ayadoo waliba qayb looga goyni doono saamigii ku soo aadi jiray Somaliland iyo Puntland. Arintani ma aha mid farax galinaysa labada maamul, laakiin hadana ma aha mid ay wax ka qaban karaan. DKMG, gaar ahaan Xafiiska Madaxweynaha ayaa la sheegayaa inuu door wax ku ool ah ka ciyaaray kor u qaadista iyo bari cintaalinta maamulka Khaatumo State, halka cuqaasha, salaadiinta iyo xubnihii bulshada rayadka ahayd ee ka qayb gashay shirkii Istanbul ay ayaguna dhinacooda door mihiim ah ka ciyaareen sare u qaadista doorka ay arimaha Soomaaliya ku leedahay Khaatumo kadib markii ay si aan kala har lahayn ugu ogolaadeen inay noqdaan muraayadda shir gudoonka Istanbul.